Kaominina Mahajanga : Tsy voaloan’i Mokthar ny karaman’ny mpiasa -
AccueilRaharaham-pirenenaKaominina Mahajanga : Tsy voaloan’i Mokthar ny karaman’ny mpiasa
31/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa tsy voafehy intsony. Voaporofo ankehitriny fa tsy mahavita ny asany ary tsy mahafehy ny andraikiny intsony ny ben’ny tanànan’i Mahajanga, Mokthar Salim Andriatomanga. Raha efa nikononkonona ny hampiatona an’ity ben’ny tanàna avy amin’ny antoko politika Mapar ity ireo mpiasa iray volana lasa izay, ankehitriny, nitokona nanomboka omaly izy ireo noho ny hafitsok’ity ben’ny tanàna tsy mahavita sy tsy mahatontosa ny andraikiny ity.
Raha ny vaovao voaray, tsy hijanona amin’ny fitokonana ireo mpiasan’ny kaominina raha tsy mivaly ny fangatahan’izy ireo. Anisan’ny goavana amin’izany ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa hatramin’ny volana Janoary noho mankaty. Izany hoe, mbola tsy nandray karama izy ireo nanomboka ny volana Janoary. Ankoatra izay, anisan’ny takian’izy ireo ihany koa ka mahatonga ny fitokonana faobe ny famoahana ny tetibola ho amin’ity taona 2017 ity, sns.
Ankoatra izay, mipetraka ny fanontaniana ankehitriny fa nataon’ingahy Mokthar Salim Andriatomanga aiza avokoa ny volan’ny kaominin’i Mahajanga ka tsy voaloa intsony hatramin’ny karaman’ny mpiasa? Raha ny marina, tsy mandray karama ihany koa ny ben’ny tanàna rehefa tsy mandray ny mpiasa. Marihina fa tsy vao izao ity ben’ny tanàna avy amin’ny Mapar ity no nanao tsinontsinona ireo mpiasa fa efa hatramin’ny nandraisany ny fitantanana ny kaominin’i Mahajanga.
Etsy andaniny, raha ny lalàna, tsy afaka mitaky vola etsy sy eroa ihany koa ny kaominina rehefa tsy manana sy mahavita mamaritra ny teti-bolam-piasana. Izany hoe, tsy afaka mitaky hetra sy haban-tsena, sns. Ity ben’ny tanàna ity anefa tsy nahavita nampahafantatra io teti-bolam-piasana ho an’ity taona ity akory hatramin’izao.
Araka izany, efa tsy mahavita sy tsy mahafehy ny kaominin’i Mahajanga mihitsy ingahy Mokthar Salim Andriatomanga.
Efa ambetin-dresaky ny rehetra, indrindra ny tontolo politika amin’izao fotoana ny resaka fifidianana. Efa nilaza ny fahavononany hiroso amin’izany ny fitondram-panjakana. Na izany aza, manantitrantitra hatrany ny hisian’ny fifidianana tsy hitondra amin’ny korontana ny fitondrana, ...Tohiny